Google wuxuu hagaajiyaa nuglaanta 49 ee Android bishii Sebtember - Tech - Numerama - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Google wuxuu saxayaa khaladaadka '49' ee Android bishii Sebtember - Tech - Numerama
Google ayaa diyaarisay qorshe ammaan ah bisha Sebtember. Waxay hagaajisaa khaladaadka 49.
Taasi waa: Android 10 waa la heli karaa dadwaynaha ilaa bilowgii Sebtember. Markii la siidaayay, waa dhammaadka magacyada macmacaanka Google ee loo nisbeeyay jiilalka nidaamka hawlgalka mobilada. Sidoo kale waa cusboonaysiinta aqoonsiga OSiyo dabcan imaatinka astaamaha cusub, sida jawaabaha caqliga leh iyo taraafikada dhaqdhaqaaqa.
Hal shay oo aan is beddelin, si kastaba ha noqotee, waa raad raacidda cilladaha ku jira Android. Agoosto 22, kahor sii deynta Android 10, Google ayaa soo baxayay Warqad amni u heellan kuwa ugu yar ee la bixiyo: waxaa jira nuglaanta 191, in kasta oo muhiimadooda loo tixgeliyo mid dhexdhexaad ah (tani waa heerka ugu hooseeya ee cabbirka ay adeegsato Google). Rebelote dhawr maalmood kadib, oo leh a macluumaad guud oo guud oo ku saabsan Android.
Naqshadaynta cusub ee Android.
Cilladaha 49 ayaa lagu bartilmaameedsaday patch Sebtember
Isku soo wada duuboo, kuwanu waa jebinta 49 ee lagu xaliyo xalka cusub. Xaqiiqdii waxay ku dhowdahay afar jeer in ka yar ogeysiiska gaarka ah ee la soo saaray dhammaadka Sebtember, laakiin dheellitirka ayaa ka sii daran: si faahfaahsan, waxaa jira cilado 45 ah oo heer sare ah (digniinta dhexdhexaadka ah) iyo 4 at darajo muhiim ah (heerka ugu daran). Waxaan ognahay inaan gudbineyno mid ka mid ah walaacyada Android 10 (AOSP 10).
Sida laga soo xigtay Google, qaar ka mid ah cilladdan ayaa u horseedi kara kor u qaad aan macquul ahayn ee mudnaanta, taas oo macnaheedu yahay in qolo saddexaad fog ay heli karaan qaybo xasaasi ah oo nidaamka ah haddii kale aan la gaari karin. Dhiqlaha kale waxay dhaawici karaan xogta shaqsiyeed ama xasaasi ah, waxay u oggolaadaan kontaroolka qarsoon ee taleefanka casriga ah meel fog ama hakin karaan shaqadooda saxda ah.
Samsung Galaxy Note 10 // Isha: FrAndroid
Google ayaa taas xusuusisay Qiimeynta darnaanta 'flaw' waxay ku saleysan tahay saameynta ka faa'ideysiga nuglaanta ay ku yeelan karto aaladda ay saameysey, iyadoo loo maleynayo in madal iyo tallaabooyinka yareeynta adeegga ay naafo u yihiin ujeedooyin horumarineed ama maxaa yeelay si guul ah ayaa looga gudbey Google ayaa sharraxay.
Ma jirto dhiig-miirasho loo yaqaan illaa iyo hadda
Marka loo eego radars-ka Google, ma jiraan wax calaamad ah oo muujinaya in dayacnaankan dayacnaantiisa ay ka faa'iidaystaan ​​dhinac saddexaad xaasidnimo xun waqtigan. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu talinayaa inaad cusboonaysiiso taleefankaaga casriga ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah iyada oo loo yaqaan 'patch Security' ee ugu dambeeyay. Sida iska cad, dadka isticmaala moobiilka ku tiirsanaan sida had iyo jeer saarayaashakuwaas oo gacmahooda ku leh siidaynta cusbooneysiinta.
Google, dabcan, waxay ku martiqaadeysaa soo-saareyaasha qalabka inay sida ugu dhaqsaha badan u sameyaan si ay macaamiishooda ugu soo bandhigaan heerka ugu dambeeya ee amniga la heli karo, si looga fogaado adeegsiga xun ee cayayaankaan. Laakiin dhab ahaantii, waxay qaadan kartaa dhowr bilood, xitaa iyadoo Google ay ku dadaaleyso inay u digaagto la-hawlgalaasheeda ugu yaraan bil ka hor inta aan la daabicin qoraal kasta oo amni.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/547522-google-corrige-49-failles-pour-android-dans-son-patch-de-septembre.html?utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=547522
Apple TV + ayaa la bilaabi doonaa Noofembar 1er oo leh taxane asal ah oo ah 8